Silk Fibroin daadata Kaalmaynta - Shiinaha Simatech
Iyada oo ku xidhan baahida macaamiisha, goobood cad, laastikada oo iska furan lagu bixin karaa qaab kasta (dhululubo, disk, saaraayo, iwm) iyo cabbir.
Iyada oo ku xidhan baahida macaamiisha, goobood cad, laastikada oo iska furan lagu bixin karaa qaab kasta (dhululubo, disk, saaraayo, iwm) iyo cabbir. The daloolada badan oo isku xiran ee goobood ee loo fududeeyo gaadiidka ee nafaqooyinka, jidaynayey unugyada ku lifaaqdo, badanayaan oo kala in giisa iyo waxbarashada vivo.
Size Pore la kala duwanaayeen karaan kala duwan ee 100-1000 micrometers; Porosity: ≥ 90%
Alaabta Tani waa wax soo saarka kartoo. Waxaan ku siin karaan taxane ah daadata goobood sida ay codsiyada aad.
Cusboonaadeen Silk Fibroin daadata Kaalmaynta
Cusboonaadeen Protein Silk Fibroin daadata Kaalmaynta
Protein cusboonaadeen Silk daadata Kaalmaynta
Protein Silk Fibroin daadata Kaalmaynta
Protein Silk daadata Kaalmaynta